ပင့်ကူ .. ငါ့ကိုအဆိပ်မဟုတ်အဆိပ်ပြောပြကြဘူး ??? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သဘာဝကျကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်း။ အဆိုပါ Voronezh ဒေသတွင်ပုံမှန်ထက် Esch ။ နှင့် Saratov ။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ကျနော့်အမြင်အတွက် =) သူတို့က) = ယင်းအပူပိုင်းဒေသမှာနေထိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမဟုတ်ပါဘူးပါပြီ
ဖူ !!!! ကျနော်ကျိန်းသေကင်မရာကိုဆင်းဆှဲမဟုတ်ပါမယ်လို့ !!!! နှင့်ပိုပြီးတစ်ခုခုဘုရားသခငျသညျဆီးတားမည်ကို စိုးရိမ်. .... ကျွန်မအပေါ်ခုန်ခဲ့ပါဘူး! ငါသည်သူတို့၏အို-H ကို-E-N ကို-ခ၏ဝမ်းနည် !!! !
ရုရှားအလွန်ကောင်းတဲ့, ဒါပေမယ့်ဘဲ, သေချာဘို့ပဲ!
ထို့အပြင်တစ်ဦးပင့်ကူ-မြင်းကျားအဖြစ်လူသိများ Argiopa (Argiope bruennichi), Arachnida သို့မဟုတ် arachnid (Arachnida) ၏အတန်းပိုင်။ ဒါကြောင့်သူကသူ၏ဒုတိယအမည်ဖြင့်မြင်းကျားခံသောအဘို့ရန်သူ, တွန်းလှန်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရသောအဝါရောင်, အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်အစင်းအရောင်များ၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာထံမှနိုင်ပါတယ်လေ့လာပါ။ သော်လည်းအမှန်တကယ်ကပိုပင့်ကူနကျယ်ကောင်နဲ့တူလှပါတယ်။ တစ်ဦးကအမျိုးသမီးအနက်ရောင်နှင့်အဝါရောင်ဝမ်းဗိုက်။
ကမ်ဘာပျေါတှငျပင့်ကူ၏ 150 မျိုးအကြောင်းကိုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဥရောပအတွက်တစ်ဦးတည်းသာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အထက်သို့နှင့်အောက်သို့သက်တမ်းတိုးရေးတစ်ဦး zig-zag strips တွေပါဝင်သည်ဟု၎င်း၏ဒဏ်ငွေ-meshed ကို web ပုံမှန်မဟုတ်သော။ ပင့်ကူ၏သူ့ရဲ့ network ကဆင်းသူမ၏ဦးခေါင်းအလယ်၌လဲလျောင်းခြင်းနှင့်လုယူရာဥစ္စာဘို့အချောင်းမြောင်း, မြေမှသည်အကြောင်းကို 30 စင်တီမီတာအမြင့်ကမှမျိုးစုံကိုအပင်တွေကိုဖြတ်ပြီးပြန့်နှံ့။ ထို့အပြင်တစ်ဦးဆင်းလှသောအစ်မ, ကြီးမားသောကွန်ယက်ကိုယက်ပင့်ကူ Araneus ငါ၏ Agriopa အနီးကပ်ဆွေမျိုး။
3 စင်တီမီတာအထီးမှအမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အရှည်၏ပြင်းအားသာ5မီလီမီတာ
ရောဂါလက္ခဏာများမိန်းမတွေက: အနက်ရောင်နှင့်အဝါရောင်ပုံစံနှင့်အတူဝမ်းဗိုက်, Light-အညိုရောင်မှောင်မိုက်ကွင်းနှင့်အတူငွေရောင် cephalothorax ဆံပင်ခြေထောက်နှင့်ဖုံးလွှမ်း; အထီး: လွင်ပြင်များနှင့်အလွန်သေးငယ်သော
အာဟာရပထမဦးစွာကျိုင်းကောင်, ထို့နောက်အခြားအအင်းဆက်ပိုးမွှား; မျှင်အောက်ပိုင်းသေ, ပြီးတော့အသားကိုမစားရကိုက် zamatyvaetsya ထုတ်ယူခြင်းလျှပ်စီးမကျော့မိ
မိတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်လအကြောင်းမျိုးပွား, အမျိုးသမီးပိုးတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအတွက်ကြက်ဥ 300400 ရေးသားထားပါတယ်; နည်းနည်းပင့်ကူကဆြုံးအတွက် Hatch, ဒါပေမယ့်လာမယ့်နွေဦး (မေလ) တွင်ပိုးအိမ်စွန့်ခွာ
နေရင်းဒေသများနေရောင်ခြည်မြေယာထဲ့, လမ်းဘေး, သစ်တောအနား; အလယ်ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းဥရောပ
ဓာတ်ပုံ Argiope bruennichi, အထီးပေါ်မှာ။ ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းသောအင်းဆက်ပိုးမွှား, လိပ်ပြာများနှင့်သူမစားနဲ့အခြားတိရစ္ဆာန်များအဘို့, အစားအဆိပ်အပြင်း။ က nebut makarom သင်သည်နည်းနည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီးအရေပြားကိုကိုက်ကိုက်ဘယ်လောက်ပင်လျှင်။ လူအပေါင်းတို့
Spider Argiope Bruennichi (ပင့်ကူ - နကျယ်ကောင်) - Argiope bruennichi, မိသားစု Argiopidae
မိသားစု Araneidae ၏ပင့်ကူနကျယ်ကောင် (LAT ။ Argiope bruennichi) araneomorphae မျိုး။ ဒါဟာဥရောပနှင့်မြောက်အာဖရိကတစ်လျှောက်လုံးအဖြစ် Asia ၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ genus Argiope, ဝမ်းဗိုက်ပင့်ကူနကျယ်ကောင်အသိုက်စင်း chrno-zhlty ပုံဆွဲ၏များစွာသောအခြားအဖွဲ့ဝင်တွေလိုပဲ။
အဆိုပါလိမ်ကွန်ယက်၏အလယ်ဗဟိုတွင်တစ်ဦးအကှေ့အကောကျပုံစံဖွဲ့စည်း stabilimentum ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင် strands ဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းမတွေကယောက်ျားထက်ပိုကြီးတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ Hybrid ချက်ချင်းကုလားကာအီးပျော့ရှိနေဆဲ cheliceral သည်အထိဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းအမျိုးသမီးရှေ့ moult ပြီးနောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မိတ်လိုက်ပြီးနောက်, အမျိုးသမီးယောက်ျားကိုစားတတ်၏။
ပင့်ကူနကျယ်ကောင်ကိုက်ခြင်းနှင့်လူဦးအထူးအငြိုးတကြီးနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာသူ့က်ဘ်ဆိုက်အတွင်းဖမ်းမိသောကျိုင်းကောင်များနှင့်ကျိုင်းကောင်ပေါ် feeds ။
ကောက်ဖို့ပါလျှင်ကိုယ်ကသာအပြည့်အဝတိုက်ရိုက် kontakte- နှင့်အတူကိုက်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးကိုက်နာကျင်ကိုက်ပေမယ့်နာကျင်မှု 2-3 ရက်ပေါင်းမှတဆင့်ရောင်ရမ်းခြင်း, နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင်သွားသော neopasnyy- ။ အန္တရာယ်ရှိသောပိုးကောင်ဆူးမှမတည့်တဲ့သူကလူအဘို့ဖြစ်၏။
လက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအတွက်ဖိနပ် .... နှင့်စစျဆေးရန်မလိုပါ
ဒါဟာဥယျာဉ်တော်၌ဖမ်းမိသည့် Lipetsk ဒေသများတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့အပြင် argiopa အတော်လေးရုရှားအဖြစ်လူသိများပင့်ကူနကျယ်ကောင်။ လူအပေါင်းတို့သည်ထိုအန္တရာယ်သည်မဟုတ်။
အတိအကျကခြံတွင်တွေ့မြင် takovozhe .... ) အလွန်ကြီးမားတဲ့ကျနော်တို့တစ်ချိန်ကထိုကဲ့သို့သောသင့်ထံမှအဘယ်မှာရှိ?! Taganrog အတွက်မဟုတ်ခဲ့
Posted in, အခြားတိရစ္ဆာန်
65 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,210 စက္ကန့်ကျော် Generate ။